Famatsian-drano : very fotsiny ny 80%-n’ny rano ampiasaina | NewsMada
Famatsian-drano : very fotsiny ny 80%-n’ny rano ampiasaina
Par Taratra sur 22/03/2017
Andro iraisam-pirenena ho an’ny fahazoana rano madio, anio. “Nahoana no ariariana foana ny rano”. Io ny lohahevitra voizina amin’ity taona ity. Hanairana ny sain’ny mponina maneran-tany amin’ny fahaizana mitantana ny rano mba tsy ho verivery fotsiny ity lohahevitra ity.
Mila ahena ny rano very ho azo havaozina na ampiasaina amin’ny zavatra hafa indray.
Raha ny salanisa, very avokoa ny 80%-n’ny rano ampiasain’ny isan-tokantrano na orinasa na tanàna… Lasa mandoto ny tontolo iainana sy manapotika ny nofon-tany indray izy ireny. Manentana ny mponina maneran-tany araka izany ny Firenena mikambana mba hanatsara ny fanangonan-drano sy ny fampiasana azy ary indrindra ny tsy hanariana fahatany ny rano amin’ny alalan’ny fanodinana ny rano efa avy nampiasaina ho mbola azo ampiasaina indray.
Tafiditra ao anatin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra laharana fahenina ny tokony hahazoan’ny olona rano madio fisotro sy fahadiovana ary fidiovana sy ny fitantanana ny angovon-drano.
Araka ny fantatra, mampiasa rano maloto sy mitera-doza avokoa ny olona maherin’ny 1,8 miliara maneran-tany.
Ho an’ny eto Madagasikara, mbola betsaka ny tokantrano tsy misotro rano madio, indrindra ny any ambanivohitra. Mivelona amin’ny loharano sy ny vovo ny mponina hahafahana mahazo rano.
Vitsy ihany koa ireo manana paompin-drano an-tanàna-dehibe fa voatery mividy rano eny amin’ny paompim-pokonolona ny tokantrano maro. Anisan’ny faritra mijaly rano ny any atsimon’ny Nosy vokatry ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa sy ny toetr’andro maina.